Girlsmụ agbọghọ Officialmụaka na Tbọchị ICT: Anyị na Fran del Pozo na-akparịta ụka, site na Code.ORG | Akụkọ akụrụngwa
Taa, Eprel 22, 22 bụ ụbọchị mba ụwa nke ụmụ agbọghọ nọ na ICT, ụbọchị dị mkpa ma ọ bụrụ na anyị echebara ọdịiche dị ukwuu nke okike nke na-apụta na ntụgharị dijitalụ na mmemme, ọ bụ ya mere anyị ji chọọ ịgwa gị ihe Usoro mejupụtara. na otu ọrụ ya si enyere ọtụtụ puku ụmụ agbọghọ si n'akụkụ ụwa niile aka n'akụkụ ọ bụla nke ụlọ iji mụtakwuo banyere teknụzụ ọhụrụ na ọkachasị mmemme. Anyị na Fran del Pozo, onye isi Code.ORG na Spain kparịtara ụka.
Na Actualidad Gadget, na-ekwesị ntụkwasị obi mgbe niile na ụkpụrụ omume anyị, anyị na-aga n'ihu na transcript niile nke ajụjụ ọnụ anyị na-ebu.
Na gịnị? Kedu mgbe Code.ORG kpebiri itinye aka na nkewa dijitalụ n'etiti ndị na-eto eto ma bụrụ akụkụ nke mgbanwe a?
A mụrụ Code.org na 2013 na United States na ebumnuche na nwa ọ bụla nọ n'ụlọ akwụkwọ ọ bụla n'ụwa nwere ohere ịmụta koodu.
Successdị ihe ịga nke ọma gosipụtara. Ihe karịrị 40% nke ụmụ akwụkwọ North America nwere akaụntụ na Code.org, yana ndị nkuzi + 2MM na ụmụ akwụkwọ 55MM gburugburu ụwa (ọkara n'ime ha bụ ụmụ nwanyị).
Ihe oru ngo a bu nke ndi ndu uwa, ndoro ndoro ochichi, ndi mmadu na ndi ochichi, dị ka Bill Gates, Jeff Bezos, Satya Nadella, Eric Schmidt, Tim Cook, Barack Obama, Bill Clinton, Richard Branson, BONO, ma ọ bụ ndị isi nke Mahadum Stanford, Harvard ma ọ bụ MediaLab nke MIT n'etiti ọtụtụ ndị ọzọ ... ma nke ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ kachasị ukwuu n'ụwa, dịka Google, Microsoft, Amazon, General Motors na Disney na-akwado.
Kedụ ka Code.ORG si arụ ọrụ iji nyere ụmụ agbọghọ aka imuta ihe mmemme?
Mụ na Khan Academy, anyị bụ ụlọ ọrụ ọzụzụ kachasị ukwuu n'ụwa n'ihe banyere ọnụ ọgụgụ ndị ọrụ. Anyị nwere ọdịnaya n'efu atụgharịrị n'ihe karịrị asụsụ 60 maka ụmụ akwụkwọ site na 4 ruo 18 afọ. Na mgbakwunye, anyị na-eme mkpọsa oge niile iji kwalite ntorobịa inweta mmemme.
Nnukwu ọdịiche anyị bụ na anyị bụ ikpo okwu nke mepere emepe kpamkpam na enweghị ebe ọ bụla n'ụwa. Ebumnuche dị n'ime ọzụzụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị site na nwata, (40% nke ụmụ akwụkwọ America nọ n'afọ a bụ ndị ọrụ nke Code.org) yana nkuzi dị iche iche dabere na afọ mmụta. N'aka nke ọzọ, a na-achọ ya n'aka ndị nkuzi, dịka onye na-enye ọzụzụ na ngwa ọrụ iji mepee mmemme agụmakwụkwọ ha. Na nkenke, na Code.org anyị na-akwalite ụdị na-egosi nke ọma, maka mmadụ niile, na ebumnuche nke iwepu ozi, okike na asọmpi nke nwere ike ịdị.
Kedu? mkpa mmemme nwere na ọrụ gị na ọdịnihu gị?
N'otu ụzọ ma ọ bụ ọzọ, ọrụ niile ga-emetụta teknụzụ na kọmputa. Agbanyeghị, imirikiti ndị bi na amaghị ihe mmemme bụ yana mkpa ọ ga-eme n’ọdịnihu nke ụmụ ha. N'ezie, ịkụziri sayensị kọmputa dị mkpa maka ọdịnihu nke ndị na-eto eto na asọmpi Spanish.
Ọ bụ ihe dị mkpa iji hazie ọzụzụ na ọrụ dị ka akụ na ụba ụwa kachasị ọhụrụ na-eme.
Kedu ihe ị chere bụ ihe kpatara ọnụọgụ ụmụ nwanyị na-amụ ma na-arara onwe ha nye sayensị na teknụzụ kọmputa belatara n'ime ụwa nke na-arịwanye elu digitized?
Echere m na enwere nsogbu stereotype nke dị oke mkpa ịkwatu ihe isi ike nke ọrụ aka ọrụ na enweghị ikike ụmụ nwanyị. Na ọdịbendị, a ghọtara na ọrụ ndị siri ike, nke chọrọ nraranye na mbọ, abụghị maka ụmụ nwanyị na ọ bụ ya mere na ọbụna ezinụlọ na-atụ aro ụmụ ha nwanyị ka ha lekwasị anya na ngalaba sayensị, dị ka ọgwụ. Lọ ọrụ mgbasa ozi na-arụ ọrụ dị mkpa n'iwepụ ọdịiche dị n'etiti nwoke na nwanyị. Ihe egosiputala ihe kariri igosiputa na umu nwoke na ndi nwanyi tozuru oke ma odi nkpa itinye umu nwanyi na sayensi na teknuzu, obughi maka ikpe ziri ezi ma obu nha anya kama nke oma na asọmpi
Kedụ ka Code.ORG si enweta ego ya niile?
Site na ndị na-enye anyị onyinye, nke bụ nnukwu ụlọ ọrụ ọgbara ọhụrụ nke ụwa, yana nnukwu ndị ọrụ ebere North America. Obere obere anyị na-achọ ụzọ ọhụrụ nke ego na ndị nyere onyinye sitere n'akụkụ dị iche iche nke ụwa n'ihi na anyị bụ ọrụ zuru ụwa ọnụ n'ezie.
Kedu ka asụsụ abụọ nke teknụzụ si emetụta nkewa dijitalụ yana kedu ka Code.ORG siri chọọ ịlụso ya ọgụ?
Ọ na-emetụta kpamkpam n'ihi na ịghara itinye ọzụzụ na ọrụ ga-emepụta ụkọ ndị ọkachamara, nke ga-esiwanye ike ikpuchi. Ọ na-emetụta usoro ọrụ, ọdịmma, asọmpi na nrụpụta ọrụ. Anyị abịaghị n'oge n'oge Bekee ma anyị enweghị ike ị nweta otu ihe ahụ ga-eme anyị na mmemme (yana ntụgharị uche).
Ì chere na ndị ntorobịa nke oge a nwere nsogbu na ihe okike, iche echiche siri ike, na idozi nsogbu?
Enweghị m data ịza ajụjụ a. Mana ọ bụrụ na m nwere ike ịsị na mgbe mmemme anyị na-etolite echiche mgbakọ na nke a na-akwado mmepe nke usoro ọrụ ndị ọzọ dịka mgbagha, iche echiche siri ike ma ọ bụ nsogbu nsogbu. Anyị amaghị ihe ọrụ nke ọdịnihu ga-abụ, mana anyị maara ụdị aka ha ga-achọ ma bụrụ, n'etiti ndị ọzọ, ndị a.
Laghachi azụ na ụbọchị mba ụwa ụmụ agbọghọ, ka Code.ORG na-ezube ime ihe ma ọ bụ mkpọsa lekwasịrị anya na emume a?
Ọ bụghị kpọmkwem ebe ọ bụ na anyị na-eme mkpọsa mgbe niile, ebe ọ bụ akụkụ nke DNA anyị ịgbakwunye ụmụ agbọghọ.
Kedu ihe ị chere nwere ike ịbụ ntinye nke Code.ORG na mba na ụzọ mmepe?
Dịka ọmụmaatụ, Africa bụ kọntinent nwere puru iche pụrụ iche. Na mba ndị ka na-emepe emepe, anyị na ndị otu mba ụwa na-arụ ọrụ n'ọhịa, ha na ndị gọọmentị mpaghara, ndị kachasị mma na mpaghara ndị a.
Anyị na-ekele ndị otu Code.ORG na ọkachasị Fran del Pozo maka nlebara anya ha na maka ịza ajụjụ ndị a niile na-enweghị mgbagha. Anyị na-atụ anya inwe ike itinye ọka anyị na mgbasa nke mmemme n'etiti ndị ntà, na ọkachasị imebi ihe mgbochi nwoke na nwanyi na ngalaba nke ekwesighi inwe ha.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Noticias » Girlsmụ nwanyị Official na ICT Day: Anyị na Fran del Pozo na-akparịta ụka, site na Code.ORG